China PVC Calcium Zinc Stabilizer mpanamboatra sy mpamatsy |Dehua
PVC Calcium sy Zinc Stabilizer
Ny karazana vaovao PVC kalsioma zinc stabilizer dia ampiarahana amin'ny teknolojia manokana miaraka amin'ny kalsioma, zinc, lubricant, antioxidant sy chelating agent ho singa fototra, izay tsy vitan'ny hoe afaka manolo ny firaka cadmium sira stabilizer, fa afaka manolo ny organika vifotsy sy stabilizers hafa, ary manana fahamarinan-toerana mafana tsara, ny toetr'andro resisitance, lelafo retardant, fahazavana fahamarinan-toerana sy ny mangarahara sy ny loko hery.Ny fanazaran-tena dia nanaporofo fa amin'ny vokatra PVC, ny fitoniana mafana dia afaka manolo tanteraka ny stabiliser salt lead, ary karazana stabilizer vaovao amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny fampisehoana tsara, ampiharina tanteraka amin'ny vokatra PVC, ny rotsak'orana sy ny fifindra-monina nateraky ny stabilizer calcium zinc mahazatra.
Taranaka vaovao amin'ny vokatra mahavelona ny tontolo iainana, tsy misy poizina, endri-javatra mahomby, mora ampiasaina.
Izy io dia manana fiparitahana tsara, mifanentana, fihetsehana fanodinana amin'ny fanodinana resin'ny PVC, azo ampiharina malalaka, ary faran'ny vokatra tsara.
Effet stable tsara, kely kokoa ny dosage ary versatility.
Ny fanoherana ny UV sy ny fanoherana ny toetr'andro dia tena tsara, ary ny vokatra vita dia afaka mampifanaraka amin'ny toe-javatra iainana isan-karazany.
3. Fanasokajiana sy ampahany fanampiny
PHR ho reference
Effet plasticizing tsara, fanoherana ny toetr'andro ary ny fahamarinan-toerana mafana mandritra ny fotoana maharitra
Fahombiazan'ny lubrication matanjaka sy fanaparitahana avo
Tena tsara anatiny sy ivelany lubrication mifanandrify, ary mampitombo hery sy ny fotsy ny vokatra
4. Fomba iraisam-pirenena
1) Soso-kevitra ny hanampy ny plasticizer momba ny 35-60 araka ny vokatra isan-karazany.
2).Ampiana paraffin chlorinated araka ny filan'ny mpanjifa tsirairay.
3).Ho an'ny vokatra plug, soso-kevitra ny hampiditra fatra bebe kokoa amin'ny savoka PE araka ny tokony ho izy, ho an'ny vokatra andiany hafa, ny fatran'ny lubricant agent dia tokony ampiana mifototra amin'ny fahombiazan'ny milina samihafa.
4).Ho an'ny fanaraha-maso ny mari-pana, dia nanoro hevitra fa ny faharavan'ny Powder dia 90-110 ℃, ny fivoahana ny poti-colloidal dia eo amin'ny 120-160 ℃ ary ny tariby extrusion dia eo amin'ny 150-180 ℃.
5) Azonao atao ihany koa ny manamboatra ny raikipohy araka ny fepetra takinao manokana amin'ny foibe fikarohana.
teo aloha: Polyethylene chlorinated ho an'ny fingotra
Manaraka: Stabilizer mitambatra PVC
Emulsion Loko fitaratra misy rano